Selenium (စီလီနီယမ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Selenium (စီလီနီယမ်)
Selenium (စီလီနီယမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Selenium (စီလီနီယမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Selenium (စီလီနီယမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Selenium ကို မြေဆီလွှာထဲတွင် တွေ့ရှိရပြီး အချို့သော အစားအစာများ (ဥပမာ။ ။ အစေ့များ၊ဘရာဇီးအခွံမာသီးများ၊နေကြာစေ့ နှင့် ပင်လယ်စာများ) တွင် သဘာဝအလျောက် ပါဝင်သည်။ Seleniumကို ခန္တာကိုယ်ထဲတွင် မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော် သိုင်းရွိုက်ဂလင်း နှင့် ခန္တာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်တို့ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် Seleniumကို လိုအပ်သည်။Selenium ဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်လည်း Seleniumကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိုင်းရင်းဆေးပညာတွင် Seleniumကို Hashimoto’s thyroiditis ဟုခေါ်သော သိုင်းရွိုက်ရောဂါတစ်မျိုးနှင့် ကိုလက်စထရောဓါတ်များပြားခြင်းကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။
Selenium (စီလီနီယမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သဘာဝ ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားတိုင်း ဆရာဝန်ထံမှ အကြံဉာဏ်ကို ဦးစွာ တောင်းခံပါ။ သဘာဝ ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းစွာလေ့လာထားသော ဆရာဝန်နှင့်လည်း တိုင်ပင်သင့်သည်။ အကယ်၍သင်သည် Selenium ကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်လိုက်ပါက ဆေးဘူးတွင်ပါသောအညွှန်းအတိုင်း သို့မဟုတ် သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို့ထံမှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာသုံးစွဲပါ။
တနေ့လျှင် 400 micrograms ထက်ပို၍ ပမာဏများသော Seleniumကို ကာလကြာရှည်စွာ စွဲသုံးပါက အလွန်ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများအပြင် အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်အတွက် ဆေးညွှန်းထက်ပို၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။ တနေ့တာအတွက် လိုအပ်သော Selenium ပမာဏမှာ အသက်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို အတိအကျလိုက်နာပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါက Selenium သုံးစွဲနေကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်၍ပြောပြပါ။ ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ ၂ပတ်ခန့် အလိုတွင် သင့်အနေဖြင့် Selenium သုံးစွဲခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Selenium သည် အချို့သော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ၏ အဖြေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သောကြောင့် သင်Selenium သုံးစွဲကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားပါ။
Selenium (စီလီနီယမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Selenium ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Selenium ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Selenium ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Selenium ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Selenium ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Selenium (စီလီနီယမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။Selenium ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Selenium ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
ကလေးငယ်များတွင် Selenium ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုံလောက်စွာ သုတေသနပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။ သို့သော် Selenium သည် ကလေးများတွင် လူကြီးများနှင့် မတူညီသော အာနိသင်၊ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိလိမ့်မည်ဟု မယူဆရပါ။
ဆေးအများစုကို အသက်အရွယ်ကြီးသူများတွင် အထူးတလည်စမ်းသပ်လေ့ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် လူငယ်များတွင် ရရှိသည့် အာနိသင်များအတိုင်း အသက်ကြီးသူများတွင် ရရှိခြင်း ရှိမရှိ သေချာစွာ မသိရပါ။ ထိုသို့ အသက်ကြီးသူများတွင် Selenium၏ အာနိသင် ကို တိကျစွာ စမ်းသပ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း လူငယ်များနှင့် မတူညီသော အာနိသင် နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ အသက်ကြီးသူများတွင် ရရှိဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Selenium (စီလီနီယမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Selenium (စီလီနီယမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
• ဆေးလွန်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ
• လက်သည်းများ ကျိုးလွယ်ခြင်း
• ခံတွင်းမှ သို့မဟုတ် ချွေးတွင် ကြက်သွန်ဖြူနံ့ရခြင်း
• အမွှေးအမျှင်များ ပါးလာခြင်း
• စိတ်တို စိတ်ဆတ်လာခြင်း
• အရေပြား ယားယံခြင်း
• ပုံမှန်မဟုတ်သော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Selenium (စီလီနီယမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Selenium ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Selenium (စီလီနီယမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Selenium က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Selenium (စီလီနီယမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Selenium ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
——>သင်၏ဦးရေပြား သို့မဟုတ် ခန္တာကိုယ် တစ်နေရာရာတွင် အရည်ကြည်ဖုဖြစ်နေသော နေရာများ၊အသားနီလန်နေသော နေရာများ ရှိနေခြင်း ——–>အဆိုပါနေရာများတွင် Selenium ကို အသုံးပြုပါက အရေပြားအတွင်းသို့ ဆေး စိမ့်ဝင်မှု ပမာဏ ပိုများလာမည်ဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Selenium (စီလီနီယမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သုံးစွဲသင့်သည့် ပမာဏ ———-> 20-40 mcg/day
ကလေးငယ်တွေမှာ Selenium ကို သုံးစွဲရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
သုံးစွဲသင့်သည့် ပမာဏ ———-> 3mcg/kg/day
ကလေးတွေအတွက် Selenium (စီလီနီယမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Selenium (စီလီနီယမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Selenium ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• ထိုးဆေး 400mcg/10ml
Selenium ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Selenium http://www.webmd.com/a-to- z-guides/supplement- guide-selenium. Accessed July 15, 2016.
Selenium http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/selenium- supplement-oral-route/proper- use/drg-20063649. Accessed July 15, 2016.
Selenium https://www.drugs.com/mtm/selenium.html. Accessed July 15, 2016.
Wide pulse pressure ( အပေါ်သွေးပေါင်ချိန် အောက်သွေးပေါင်ချိန်ခြားနားမှုများနေခြင်း)
ခရုစားခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ။ ။